कुन सीडीओको कहाँ सरुवा ? (सूचीसहित)
गृह मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिव गरेर ५२ जनाको सरुवा गरेको छ । हेर्नुहोस्, कुन सीडीओको सरुवा कहाँ भएको छ ?
गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका सीडीओहरुको सरुवा गरेको हो ।
कुन सीडीओको कहाँ सरुवा (सूचीसहित)
यसैगरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ एसपी तथा १८ डिएसपीको सरुवा गरेको छ । सरुवामा सात जिल्लाका प्रहरी इन्चार्ज फेरिएका छन् ।